Global Voices teny Malagasy » Ny Herinandron-tahotr’i Myanmar · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Desambra 2018 18:02 GMT 1	 · Mpanoratra Preetam Rai Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Ady & Fifandirana, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora
Te hampatsiahy ny olona i Moe Moe fa herinandro lehibe eo amin'ny tantaran'i Myanmar  (rohy maty) ity herinandro ity.
8 Aogositra androany ary te hanoratra lahatsoratra mikasika ny tsy rariny nitranga tamin'ireo vahoaka Birmana tamin'ny 8 Aogositra 1988 (8-8-88) aho.
Tamin'io andro io, novonoin'ny ny tafika Birmana ireo mpanohitra tsy nitam-piadiana an-jatony izay nangataka demokrasia goavana kokoa. Nahitàna herisetra bebe kokoa ireo roa andro nanaraka.
Mampifandray mankany amin'ny sombin-dahatsoratra avy ao amin'ny Burmawatch.org  ilay bilaogera
Nanitsy ny basiny ho any amin'ny olona mitangorona ireo miaramila. Avy eo, tampotampoka teo, nisy ireo poa-basy roa fampitandremana ary tao anatin'ny segondra vitsy monja, naka ny afovoan'ny sehatra ireo tifitra basy mamaha-tena ary maty teo noho eo ny olona am-polony, tanora sy antitra. Nivadika ho korontana tanteraka ny tany amin'ireo arabe teo akaiky ny Lapan'ny Tanàna, niaraka tamin'ny olona nikiakiaka, nihazakazaka sy nialoka teny amin'ny làlana izay hitany teny.
Feno olona maty sy naratra ireo toby fitsaboana. Lany ireo angon-drà. Tena nahakivy tanteraka ny toejavatra hany ka nikarakara lalomisesy (procession) angatahana ny fitsaharan'ny tifitra ataon'ireo miaramila ireo dokotera sy mpitsabo mpanampy.
Milaza ny fanehoankevitra iray ao amin'ilay lahatsoratra
Mihevitra aho fa tsy ho afaka amin'ny jadon'ny tafika mihitsy ny vahoaka Birmana eto amin'ity fiainana ity. Tokony ho hendry sy hahatakatra isika fa tsy tanteraka foana ny fanantenana sy ny nofinofy raha toa ka mbola mitohy ho vahoaka mizarazara ny Birmana. Ny tena marina dia maro ireo Birmana mbola miaina anaty fahantrana lalina, tsy manantena fiovàna, raha toa ka miaina ny *nofinofiny* kosa ny olona sangany voafidy eo anatin'ny famoretana ny vahoakany amin'ny tsy firaharahiany.
Mamaly ilay bilaogera
Ho ady foana ny fiainana, noho izany tsy afaka ny hilavo lefona isika, na inona na inona ataontsika. Raha toa ka somary sarotra sy sarotra alaina ny zavatra antenaintsika, mihevitra aho fa afaka manao zavatra kely mba hitondra fiovana isika tsirairay. Miezaka ny mitoraka bilaogy matetika aho mikasika ireo zavatra mahatsiravina mitranga aty Birmania, mba hampatsiahivako ny tenanko, ny namako, ary koa ireo olona tsy mbola nahafantatra izao mihitsy. Ho indray mitete anatin'ny farihy fotsiny ve ny fomba fanaovako ireo zavatra kely ireo sy ireo mpikatroka ara-politika manao ireny zavatra kely ireny? Angamba, kanefa afaka mameno ilay farihy na manamaina azy ny fitetevana maro, na inona na inona fandehany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/21/131148/
 herinandro lehibe eo amin'ny tantaran'i Myanmar: http://www.moeyyo.com/MM/archives/2006_08.html#000722